‘अब त अति भयो म मेरा मामा माइजु (गोबिन्दा र सुनिता) संग माफी माग्न चाहन्छु’ : कृष्णा अभिषेक – Kavrepati
Home / मनोरंजन / ‘अब त अति भयो म मेरा मामा माइजु (गोबिन्दा र सुनिता) संग माफी माग्न चाहन्छु’ : कृष्णा अभिषेक
admin September 16, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 68 Views
एजेन्सी । कमेडियन कृष्णा अभिषेक र उनका मामा माइजुबीचको विवाद ३ वर्ष अघि देखि जारी छ । अब भने कृष्णले यो विवादले आफुलाई दिक्क लागेको बताएका छन् ।
उनले आफ्ना मामा गोविन्दा र माइजु सुनितासँग माफी मागेका छन् । उनले आफुले बारम्बार माफी माग्दा पनि माफी नदिएको प्रति पनि दुख ब्यक्त गरेका छन् ।
सन् २०१८ मा कृष्णाकी श्रीमती कश्मीरा शाहले गरेको एक ट्विटका कारण उनीहरुबीच विवाद भएको हो । कश्मीराले ट्वीटमा केही मानिसहरु पैसाको लागि नाच्ने गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।
सुनिताले कश्मीराको ट्विट गोविन्दाप्रति लक्षित रहेको आरोप लगाए पछि विवाद चुलिएको हो । सन् २०१९ मा जब सुनिता र गोविन्दा ‘द कपिल शर्मा शो’मा पुगेका थिए, सो समय उनीहरुले कृष्णासँग स्टेज शेयर गर्न अस्विकार गरेका थिए ।
Previous कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका पल्टाउदै गरेको टिकटक पुरै भाईरल बन्यो ! हेर्नुहोस
Next आहा ! हात खुट्टा यस्तो भएका क्युट भाइरल बाबुका यी रमाइला टिकटकहरु (हेर्नुस् भिडियो )